I-Semalt Iingcali Ukuqinisekisa Ukuba Kufuneka Ufunde Ngezinto Zokukhwabanisa Nge-Intanethi kunye ne-Scams - Nasi isizathu
Ukukhwabanisa kwi-intanethi kudla ngokuba kubizwa ngokuthi "inkohliso ye-intanethi" okanye "inkohlakalo". Olu hlobo lobuqhetsebaivela kwiifom ezininzi, njenge-imeyili spam. Isohlwayo sokusebenzisa okanye ukwenza i-oda yemali ye-post yokukhohlisa ishumi kwiminyaka engamashumi amabini entolongwenieUnited States. Abagxeki bavame ukuzenza njengabameli bemibutho yokunceda kwaye bafune uncedo lwabaxhobaiintlekele zemvelo, ukuhlaselwa kwamaphekula, ukungquzulana kwendawo okanye izifo zesifo. Ukuba uxhoba lomnxeba we-inthanethi, kubalulekile ukuba ungeniseingxelo kwingxelo ye-Cybercrime Online Reporting Network (ACORN). Iingxelo ezenziwe kule nethwekhi ziya phambili kumapolisaokanye ii-arhente zengqondo ukuze uphando.
uJason Adler, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt ,ijolise kwiintlobo zobuqhetseba kwi-intanethi ngenjongo yokukunceda uzikhusele ekuhlaselweni.
Iindidi eziqhelekileyo zobuqhetseba kwi-Intanethi zibuqhetseba bebhanki,kunye nokuthengwa kwendawo yokuthengwa kwintengiso.
Ubuqhetseba bebhanki kwi-Intanethi
Kuchazwe njengendlela yokusebenzisa iindlela ezingekho mthethweni ukufumana i-asethi, eyakhoulwazi, ipropati okanye imali ngeziko langasese okanye i-hacker. Iintlobo eziqhelekileyo ze-intanethi yebuqhetseba bebhanki yi-recruitment ye-mule kunyeubuqhetseba. Hackers kaninzi zisebenzisa ulwazi lwakho olubucayi njengephasiwedi okanye igama lomsebenzisi ukufikelela iinkcukacha zakho. Basenokufumana ulwazi olunjaloiipilisi, izixhobo eziphathekayo okanye ii-laptops ngokuthumela i-malware kunye ne-virus.
Ezi ntsuku, abaninzi abantu basebenzisa i-mobiles zabo kunye nee-smartphone ukufikelela kwiibhanki zabo.akhawunti. Izigwenxa ziyazi ukuba kunokuba nzima ukuba bafumane ulwazi lwakho. Ngoko ke, bathumela ii-imeyli ezingalunganga okanye bacele ukuba ucofe kwizinto ezithileunxibelelwano, ukutyhila ulwazi oluyimfihlo. Akufanele uphendule kuma-imeyili angaziwa. Kubalulekile ukuba ungaqakraza kwiikhonkco ezingaziwakwaye ungabunaki abantu abaqhubeka bethumela okunamathiselwe kuyo.
Ukuphangisa, ngakolunye uhlangothi, ngumzamo wokufumana ulwazi olunzulu olufana noluntuIgama lomsebenzisi, iphasiwedi, i-ID ye-PayPal kunye neenkcukacha zekhadi lesikweletu, ngokuziguqula njengezinto ezinokuthenjwa kwi-elektroniki.
Iifayile ezikhethekileyo zogaxekile zinceda ukunciphisa inani lee-imeyili zokuphanga ezifikelela kuyobhokisi. Ungakwazi kwakhona ukufaka i-antivirus okanye i-software ye-malware ukuze ugcine ulwazi lwakho lugcinwe. I-AFP ibonisa ukuba awuphendulii-imeyli yogaxekile kwaye uyisuse ekuqaleni. Ukuba kukho nayiphi na isinamathiselo, akufanele uvule ezo ziqhotyoshelweyo njengoko zingenayoiinkqubo ezingafunekiyo okanye iintsholongwane.
Ukukhwabanisa kwendawo yokuthengwa kwintengiso
Abagxeki bavame ukusebenzisa i-teknoloji yakutshanje ukusekela iiwebhusayithi zokuthengisa ezibuxoki ezibukekakufana nezitolo ezidumileyo zokuthengisa. Basebenzisa izakhiwo eziyinkimbinkimbi kunye noyilo ukukhangela abantu abaninzi nangaphezulu. Kubalulekile ukuba awukwaziFaka ulwazi lwakho lomntu, iinkcukacha zekhadi lesikweletu okanye i-ID ye-PayPal kwiiwebhusayithi. Zonke iisayithi zintengiso ze-intanethi zinemithetho eqingqiweyo nemimiselo.Abakwa-Scammers abanakukuhlaselwa ngala mawebhsayithi, kwaye bayazi indlela yokujongana nabantu abangaphandle kweevenkile. Ungabonisana neIKomishoni ye-Afrika kunye neKhomishoni yabathengi ukunciphisa ingozi yokukhwabanisa kwi-intanethi. Xa usebenzisa iiwebhusayithi zentengiso njenge-eBay, ziyaandinakubuza nantoni na ngekhadi lakho lekhredithi okanye i-PayPal.
Ukuba ufumene ii-imeyile ezinokukrokrela, indlela efanelekileyo kunye neyona ndlela ilula ukuyicimaekuqaleni. Kwakhona kubalulekile ukuba ungacacini kwiinkcukacha ezithunyelwayo ngezo meyile Source .